Iyo yepamutemo Twitter application inonyangarika kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
Iyo yepamutemo Twitter application inonyangarika kubva kuApple Watch
Zvakanaka mushure mekupedzisira kugadzirisa kweiyo kushandiswa kwepamutemo kwenzvimbo yekudyidzana Twitter, yanyangarika kubva kuApple Watch pasina chikonzero chiri pachena. Icho hachiratidzike sechimwe chinhu chenguva pfupi uye ndechekuti hapana chakaziviswa zviri pamutemo kubva kuTwitter nezve izvi.
Zvinotaridza kuti iyo yekuvandudza kune vhezheni 7.8 yeTwitter iyo yaiti inogadzirisa mamwe matambudziko nezvikanganiso izvo zvaisabvumidza vashandisi kuisa mapikicha ekumusoro kupera kweichi chishandiso cheApple wachi. Yenguva yekuona shanduko asi parizvino maawa akati wandei apfuura uye hazvioneke zvakare.
Amazon, eBay kana Google Mepu dzakabviswa kubva paawa pasina ziviso kare kare uye nanhasi havasati vaine chikumbiro chinowanikwa kune vashandisi veApple Watch, saka zvinokwanisika kuti mune ino app iyo yaikubvumidza iwe kuona iyo Nguva Mutsara, maTweets achangobva kuitika kana kutarisa account yako kubva pachiuno chako yabviswa. Zvinogona kunge zviri izvo kuti ivo vari kugadzirira vhezheni nyowani yakavandudzwa zvachose, asi iko kushanda kwakashanda mushe uye kwanga kusisina matambudziko makuru ekushandisa saka zvese zvakashamisa.
Nezuro masikati imwe nhau ine chekuita neTwitter yakatangwa uye ndeyekuti pasocial network ichawedzera huwandu hwevatambi vanowanikwa kune vashandisi, ichatanga kubva pa140 kuenda paviri, 280 munguva pfupi iri kutevera. Ichi chiyero hachifadze kune wese munhu uye parizvino muyedzo, asi zvaizoitika munguva pfupi iri kutevera. Ndinovimba iyo app yeiyo wachi zvakare ndeye kubviswa kwenguva pfupi uye ichakurumidza kuwanikwa kune vashandisi veApple Watch zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yepamutemo Twitter application inonyangarika kubva kuApple Watch
Kana iwe uine macOS server, ako matsva achaenda nekukurumidza neMacOS High Sierra